DOORASHOOYINKA SOMALILAND Xilligee ugu haboon in lagu beego qabashadooda? |
DOORASHOOYINKA SOMALILAND Xilligee ugu haboon in lagu beego qabashadooda?
Hargeisa(GNN):-Cimilada Somaliland waxa yaalaa saamaynta ugu wayn ku yeesha dabaylaha loo yaqaan Maansuunka oo Jilaalkiina ka soo dhaca Waqooyi Bari( North East Mansoon) loona yaqaano Jiilaashin, Gugiina ka soo dhacda Koonfur Galbeed(South West Mansoon) loona yaqaan Dabayl Xagaa. Waxa jira laba xili oo kale oo loo yaqaano labada kaliilood( Iner-mansoonal) oo ah xilyada kala guurka labada dabaylood oo ka horeeya labada xili-roobaad ee guga iyo dayrta.
Hadii lugna baqe lugna dirir u jog noqto doorashooyinka waxa saamayn kara Jiilaal oo roob la’aan dadka reer miyiga ah ee xoolo dhaqatada ah ku keenta in baad iyo biyo la’aani ku dhacdo taasina ay ku qasabto in degaanadii ay oolaayeen ka dool raacaan oo degaamo kale oo kala fug u hayaamaan. Jilaalku waxa uu ug daran yahay sedexda bilood ee January’ Febuary’ iyo March oo kaliil ah. Roobabaka gugu sida caadiga ah waxay curtaan bisha April. Waxa halkan taal iyaduna xagaagii oo dhulka xeebaha ahi ay aad u kululyihiin gaar ahaan bilaha June, July, Augost. Sidaa marka ay tahay xiliyada doorashooyinka Somaliland waa in laga duwo oo aan lagu begin lixda bilood ee Jiilaalka iyo Xagaaga ah ee January, Febuary, March iyo June iyo July iyo Augost. Xili doorashooyinku markaa waa in lagu beego lixda bilood ee kale.
Doorashadan imika dib u riixideeda la wado marka aynu eegno ugu horeen hadii ay sababtu tahay abaarta waxa la qaban karaa oo ugu haboon horaanta may. Hadii ay dib uga dhacyso laakiin isla sanadkan in la qabto la doonayo oo aanay dib uga dhicin waxaynu haysanaa September, Octobar, November, iyo December. Intaa hadii ay dib uga sii dhacdo sheekadu markaa abaarta maaha ee waa muddo kordhin kale iyo sheekadii doorasho diidka